Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Immunization Chart ကာကွယ်ဆေးထိုးဇယား
Immunization Chart ကာကွယ်ဆေးထိုးဇယား
ကာကွယ်ဆေးအမည် အကြိမ် ကလေးအသက်
1. BCG ဘီစီဂျီ - မွေးကာစ
2. DPT ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) 1 ၆ ပါတ် ၁ လခွဲ
-2၁၀ ပါတ် ၂ လခွဲ
-3၁၄ ပါတ် ၃ လခွဲ
Booster ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) ထပ်ထိုး 1 ၁၈ လ ၄ လခွဲ
Booster ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) ထပ်ထိုး ၂ ၄ နှစ်ခွဲ
3. Oral Polio ပိုလီယို ၁ မွေးကာစ
- ၂ ၆ ပါတ် ၁ လခွဲ
- ၃ ၁၀ ပါတ် ၂ လခွဲ
- ၄ ၁၄ ပါတ် ၃ လခွဲ
- ၅ ၁၈ ပါတ် ၄ လခွဲ
Booster ပိုလီယို ထပ်ထိုး ၁ ၁၈ လ ၄ လခွဲ
- ၂ ၄ နှစ်ခွဲ
4. Measles ၀က်သက် - ၉ လ
5. MMR အမ်အမ်အာရ် - ၁၅ လ
6. Hepatitis အသဲရောင်အသားဝါ B 1 မွေးကာစ
-2၁ လ
-3၆ လ
7. Hi B အသဲရောင် ဘီ 1 မွေးကာစ
- ၂ ၂ လ
- ၃ ၄ လ
8. Typhoid တိုက်ဖွိုက် - ၂ နှစ်
9. Hep A အသဲရောင် အေ 1 and2အချိန်မရွေး
10. Help B Booster အသဲရောင် ဘီ ထပ်ထိုး - ၁၀ နှစ်
11. TT မေးခိုင်ထပ်ထိုး - ၁၅-၁၆ နှစ်
Immunization Chart ကာကွယ်ဆေးထိုးဇယား၊ (အသက်အလိုက်)
ကလေးအသက် ကာကွယ်ဆေးအမည် အကြိမ်
မွေးကာစ BCG ဘီစီဂျီ တီဘီကာကွယ်ဆေး -
မွေးကာစ OPV Oral Polio ပိုလီယို 1
မွေးကာစ Hepatitis အသဲရောင်အသားဝါ B 1
မွေးကာစ Hi B အသဲရောင် ဘီ 1
၄ ပါတ် (၁ လ) Hi B အသဲရောင် ဘီ 2
၆ ပါတ် (၁ လခွဲ) DPT ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) 1
၆ ပါတ် (၁ လခွဲ) OPV Oral Polio ပိုလီယို 2
၈ ပါတ် (၂ လ) Hi B အသဲရောင် ဘီ 2
၁၀ ပါတ် (၂ လခွဲ) DPT ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) 2
၁၀ ပါတ် (၂ လခွဲ) OPV Oral Polio ပိုလီယို 3
၁၄ ပါတ် (၃ လခွဲ) DPT ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) 3
၁၄ ပါတ် (၃ လခွဲ) OPV Oral Polio ပိုလီယို 4
၁၆ ပါတ် (၄ လ) Hi B အသဲရောင် ဘီ 3
၁၈ ပါတ် (၄ လခွဲ) OPV Oral Polio ပိုလီယို 5
၆ လ Hepatitis အသဲရောင်အသားဝါ 3
၉ လ Measles ၀က်သက် -
၁၅ လ MMR အမ်-အမ်-အာရ် -
၁၈ လ Booster ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) ထပ်ထိုး 1
၁၈ လ Booster OPV ပိုလီယို ထပ်ထိုး 1
၂ နှစ် Typhoid တိုက်ဖွိုက် -
၄ နှစ်ခွဲ Booster ဒီပီတီ (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) ထပ်ထိုး 2
၄ နှစ်ခွဲ Booster OPV ပိုလီယို ထပ်ထိုး 2
အချိန်မရွေး Hep A အသဲရောင် အေ 1 and 2
၁၀ နှစ် Help B Booster အသဲရောင် ဘီ ထပ်ထိုး -
၁၅-၁၆ နှစ် TT မေးခိုင်ထပ်ထိုး -